Izicwangciso zezifundo: Iphonografi kwi-Intanethi-Isiseko soMvuzo
Ikhaya Izicwangciso zesifundo sasimahla Izicwangciso zezifundo: Iphonografi ye-Intanethi
Inqaku elikhethekileyo lezifundo zeSiseko soMvuzo kukugxila ekusebenzeni kwengqondo yokufikisa. Oku kuluncedo kunceda abafundi baqonde kwaye bakhe ukuzomelela kwizisulu ezinokubakho ekusebenziseni iphonografi. Isiseko soMvuzo siye samkelwa yiKholeji yaseRoyal yaBasebenzi abaqhelekileyo eLondon ukufundisa oomasifundisane abaqeqeshiweyo kwimpembelelo yephonografi kwimpilo yengqondo neyasemzimbeni.
Izifundo zethu zihambelana neSebe leMfundo lakutshanje (urhulumente wase-UK) “Imfundo yobudlelwane, ubudlelwane kunye nemfundo yezesondo (i-RSE) kunye nemfundo yezempilo” isikhokelo esisemthethweni.
Uthando, iphonografi kunye nobudlelwane
Iphonografi kwi-Intanethi kunye neMpilo yeNgqondo
Isifundo 1: Iphonografi kuvavanyo
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi isetyenziswa ngokubanzi ngabantu abancinci, ngakumbi ngamakhwenkwe, kodwa ngoku iyanda ngamantombazana.
Kwesi sifundo kubafundi besikolo esiphakamileyo sibeka iphonografi kuvavanyo. Sibuza umbuzo, "Ngaba iphonografi iyingozi?" Sinikezela ngeziqwenga ezisibhozo zobungqina ukunceda abafundi ukuba bacinge ngemicimbi, bagxeke ubungqina njengejaji, kwaye babhale isigwebo sabo kunye nokuqiqa kubandakanya. Baza kuva kwi-neurosurgeon, umfana oselula kunye nebhinqa eliselula abafumana iziyobisi ezingamanyala, ugqirha wezengqondo ekuhlawuleni umzi-mveliso we-porn, umvelisi we-porn 'yokuziphatha' kunye nenkcazo yoMbutho wezeMpilo weHlabathi yezempilo yezesondo.
Njengemvelaphi, uMbutho wezeMpilo weHlabathi kuHlelo lweZifo (i-ICD-11) ithi ingxaki yokusebenzisa iphonografi inokuchazwa njengokunyanzelwa kokuziphatha ngokwesondo kunye nokuphazamiseka okuluthayo. Kwangelo xesha, imboni yamanyala, njengeShishini leCuba kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo ngokutshaya kunye nomhlaza wemiphunga, ihlawula abaqeqeshi bezempilo ukuba bayala ukuba akukho nxu lumano phakathi kokusetyenziswa kwe-porn kunye noluhlu lweengxaki zempilo. Basebenza ngokubanzi kwimidiya yoluntu nakwi-intanethi ngokubanzi. Oku kukhokelela kukudideka okuninzi malunga nefuthe lokwenyani le-intanethi ngakumbi kulutsha.
Isifundo 2: Uthando, Iphonografi kunye noBudlelwane
Umntu uziqonda njani iimpawu kunye neempawu ezintle zobudlelwane obusondeleyo bobudlelwane obusenyongweni?
Ukuziphatha ngokwesini, kunayiphi impembelelo kwimvume yesondo, uxinzelelo ngokwesondo, ukunyanzelwa, ukudlwengulwa, ukuhlaselwa ngokwesondo kunye nobuhlobo? Buphi ubungozi kunye nembuyekezo yokusebenzisa iphonografi? Ziintoni iimpawu kunye nokusetyenziswa gwenxa?
Isifundo sinika uluhlu lweendlela zokunceda abafundi ukuba babe kuko konke abanako kunye nokuphuhlisa ubudlelwane obunempilo ukuya phambili.
Isifundo 3: Iphonografi kwi-Intanethi kunye neMpilo yeNgqondo
Kule minyaka imbalwa idlulileyo kuye kwakho ukonyuka okumangalisayo kwimiba yempilo yengqondo phakathi kolutsha. Utshintsho olwenzeka rhoqo ngenxa yalo bhubhani luyenze mandundu le meko.
Isifundo sijonga ukuzithemba komzimba kunye nendlela iisayithi zoononografi kunye neendaba zoluntu ezinokubangela ukuthelekiswa okungapheliyo nabanye kwi-intanethi. Ikwajonga kwakhona indlela iinkampani ze-intanethi, ngakumbi iphonografi kunye neenkampani zemidlalo, ekujoliseni ubungozi kwingqondo yokufikisa ukuze babenze babe ngabasebenzisi abaqhelekileyo. Abafundi bafumanisa ukuba iisayithi zasimahla azikho simahla. Iinkampani ze-Intanethi zenza iibhiliyoni zeerandi / iipawundi kumnqweno womsebenzisi, ukuthengisa idatha yabo kunye nezinto abazikhethayo ngeenjongo zentengiso, amaphepha akhutshelweyo kunye nokuthengiswa kweemveliso ezinxulumene noko.
Esi sifundo sijolise kubafundi besikolo esiphakamileyo kodwa sinokulungiswa kwisikolo esisezantsi. Injongo kukwenza ukuba abafundi babone into eqhelekileyo kunye nengxaki kubo nakwabanye kwaye, xa kuvela imiba, bayayazi indlela yokufuna inkxaso kwangoko kwimithombo efanelekileyo.
Inika izicwangciso eziluncedo zokunciphisa ukusetyenziswa kwe-intanethi kunye nokwakha ukomelela.
Isifundo 4: Uvavanyo olukhulu lwe-Porn
Esi sifundo sihlaziya iinyani kunye neenkcukacha-manani ezivela kwintetho ye-TEDx eyaziwayo, i-Great Porn Experiment ukusuka kwi-2012. Ukuza kuthi ga ngoku intetho sele ineembono ezingaphezu kwesigidi se-13.5 kwaye iguqulelwe kwiilwimi ze-18.
Icacisa umngcipheko wokuzibandakanya kwi-intanethi ngokuhamba kwexesha, ezinje nge-erectile disys function, kwaye kutheni ulutsha luthatha ixesha elide ukubuyisa impilo yabo yezesondo kunamadoda amadala.
Isifundo sinikezela ngeendaba ezimnandi ngamabali amaninzi okubuyisela ebantwini ngabantu abancinci abaziva bephilile, benamandla, bethengisa ngakumbi kwaye besebenza nzima kwaye bephumelela ngakumbi ekutsaleni abantu abatshatileyo bakuba beyekile ukubukela iphonografi.
Kukho izixhobo eziluncedo zokwazisa abafundi ukuba banqwenela ulwazi oluthe kratya.